Lesona 13: Mandroso amim-pinoana
Hodinihana mandritra ity herinandro ity: Fil. 2:5-11; Mat.4:18-20: Asa. 9:3-6, 10-20; Jao. 21:15-19.
Tsianjery: "Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesôsy koa, Izay, na dia nanana ny endrik'Andriatnanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamn'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona" Fil. 2:5-7.
Catégorie : Lesona 13: Mandroso amim-pinoana
Nandao ny zavatra rehetra i Jesôsy mba ho eto amin'ity tany ity. Nafoiny ny lanitra, ireo anjely, ary ny fahafahana mifanatri-tava amin'Andriamanitra Rainy. Tonga teto amin'ity planeta feno faharatsiana ity i Jesôsy mba haneho amintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Tonga Izy hampiverina ny fon'ny olombelona Aminy sy hamonjy ny mpanota ho afaka amin'ny fahafatesana. "Tsy mety ho tsapa mihitsy ny vidin'ny nanavotana antsika, raha tsy rehefa hijoro miaraka arnin'ny Mpanavotra eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny voavotra. Amin'izay, rehefa mitosaka amin'ny tenantsika manontolo ireo voninahitry ny fonenantsika mandrakizay, ka ho tretrika isika, dia hotsaroantsika fa nilaozan'i Jesôsy izany rehetra izany ho antsika, fa tsy hoe nilaozany fotsiny ny lapan'ny lanitra, fa nanao vivery ny ainy Izy ka nanaiky ny faharesena sy ny fahaverezana mandrakizay. Amin'izay dia hatsipintsika eo an-tongony ny satroboninahitsika ary hasandratsika ny hira hoe: Ny Zanak'ondry Izay novonoina, dia miendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra» t. 121.
Rehefa miara-miasa amin'i Jesôsy hamonjy ny mpanota isika dia tsy maintsy mandao ny zava-drehetra ihany koa. Tsy maintsy mandroso amim-pinoana sy fankatoavana isika.
Tonga hatramin'ny fahafatesana izy noho ny fitiavany (Fil. 2:5-11)
Mampirisika antsika i Paoly mba ho ao amintsika ny saina na ny fisainan'i Jesôsy . Mahatonga antsika hametra-panontaniana izany manao hoe: "Saina manao ahoana no tao amin'i Jesôsy? Inona no mifehy ny fisainany? Inona no tao an-tsainy?"
Vakio ny Fil. 2:5-11. Ahoana no anehoan'ireo andininy ireo ny foto-pisainan'i Jesôsy? Inona ilay fitsipika lehibe mifehy ny fiainany manontolo?
Hatrany am-piandohana i Jesôsy no efa nitovy tamin'Andriamanitra. Ireto teny ireto no anambaran'i Paoly io fahamarinana mandrakizay io: "Izay, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra" - Fil. 2:6. Ilay teny hoe «endrika. dia avy amin'ny teny grika hoe: morphê, izay midika hoe: «ny maha-izy ny zavatra iray na ny natiorany. Mampiseho amintsika izany fa misy zavatra anankiroa mitovy lanja eto, dia ny Ray sy ny Zanaka izany. Izao no voalaza ao amin'ny SDABC: Mitovy amin'Andriamanitra Ray i Jesôsy. Ambonin'ny hery rehetra Izy. Nambaran'i Paoly izany mba hanehoana amintsika fa latsaka ambany dia ambany tokoa i Jesôsy raha nidina tety an-tany ka tonga olombelona.. - b. 7, t. 154, nasiam-panamboarana. Hoy koa i Ellen G. White: Ao amin'i Kristy no misy ny fiainana, araka izay niandohany, tsy nindramina, tsy noraisiny avy tamin'ny hafa.- IF, tt. 566-567.
Hatrany am-piandohana no efa nitovy tamin'Andriamanitra i Jesôsy. Saingy tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra'. Misy heviny mahaliana tokoa io fanambarana io amin'ny teny grika. Azo nosoratana hoe «manafoana. izany. Koa «nanafoana ny Tenany an-tsitrapo i Jesôsy , ka tsy naka ny haja amam-boninahitra izay itoviany amin'Andriamanitra. Ary dia nisafidy ny ho tonga olombelona Izy ka teraka sy nanana vatana olombelona. Nanjary mpanompo teo amin'ny olombelona Izy. Nanehoany ny lalam-pitiavan'ny lanitra izao tontolo rehetra izao. Ary ny fanehoam-pitiavana lehibe indrindra nasehony dia izao: maty teo amin'ny hazo fijaliana Izy noho ny fahotantsika. Nanolotra ny ainy hamonjena antsika mandrakizay Izy.
Feno fitiavana ny fisainan'i Jesôsy . Ny ainy mihitsy no nanefa noho ny fitiavany. Manara-dia an'i Jesôsy isika rehefa tia araka izay nitiavany koa. Tsy maintsy manompo tahaka ny nanompoany koa isika, miasa tahaka ny niasany. Tsy maintsy avelantsika hanafoana ny tenantsika ny Fanahy Masina tsy hisian'ireo faniriana sy drafitra feno fitiavan-tena ao. Hisy sarany aloantsika noho ny fanaovana izany. Nandoa ny sarany lafo vidy tamin'ny namoizany ny zavatra rehetra i Jesôsy . Kanefa izany no antony ilazan'ny Baiboly hoe: "Koa izany no nanandratan'Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra"- Fil. 2:9.
Ny fiantsoan'ny Jesôsy (Mat. 4:18-20)
Alaivo sary an-tsaina hoe ao anatin'ny sambony i Petera sy i Jaona. Maraina mahafinaritra tany Galilia tamin'izay ary nampisava ny hatsiaka ny masoandro. Mikasa ny handeha hanarato i Petera sy i Jaona, manantena ny hahazo trondro be dia be. Nandeha tsara mantsy ny asa fanaratoana tao ho ao. Koa nanantena i Petera sy i Jaona fa ho andro tsara hanatanterahana izany koa ity indray mandeha ity. Raha vao niposaka ny masoandro dia, indro, misy olona iray tonga manatona an'i Petera sy i Jaona; Jesôsy avy any Nazareta io. Tsy azon'izy ireo an-tsaina fa hiova tanteraka tsy ho ela ny fiainany.
Vakio ny Mat. 4:18-20. Ahoana no anehoan'ireo andininy ireo amintsika fa tian'i Jesôsy hanao zavatra mihoatra noho ny fanaratoana trondro i Petera sy i Jaona? Araka ny hevitrao, nahoana i Petera sy i Jaona no tapa-kevitra hanaraka an'i Jesosy?
Voalazan'ny bokin'i Jaona fa efa mihoatra ny herintaona no nahafantaran'i Jaona sy i Petera an'i Jesôsy, saingy tsy mbola nanolotra tanteraka ny fiainany ho Azy izy ireo. Nisy zavatra mihitsy tao amin'ny tenin'i Jesôsy, teo amin'ny endriny, na teo amin'ny fihetsiny, izay nisarika azy ireo hanompo an'Andriamanitra. Nandao ny sambony, ny asany, sy ny zavatra rehetra fantany i Petera sy i Jaona mba hanarahany an'i Jesôsy. Nahoana? Nanasa azy ireo i Jesôsy hanao zavatra lehibe kokoa eo amin'ny fainany. Mpanarato toy ny hafa rehetra ihany i Petera sy i Jaona, saingy azony an-tsaina fa nanasa azy ireo i Jesôsy hanao zavatra tena miavaka tokoa. Mety tsy mangataka aminao i Jesasy anio mba handao ny asanao, saingy maniry kosa Izy ny hanaovanao zavatra manokana ho Azy. Tiany hizara ny fitiavany ianao. Tiany koa ianao hijoro ho vavolombelona amin'ny olona momba ny fahamarinany ka hanome voninahitra ny Anarany.
Jereo ao amin'ny Mat. 9:9 ny niantsoan'ny Jesôsy an'i Matio , ilay mpamory hetra. Nahoana no tena manaitra tokoa izany?
Teo amin'ny fanjakana rômanina, ny mpamory hetra dia naka ny volan'olona tamin'ny fomba feno hafetsena. Noho izany dia halan'ny olona ny mpamory hetra tao Isiraely. Kanefa dia nantsoin'i Jesôsy hanaraka Azy ity mpamory hetra ity. Ny fanasan'i Jesosy azy dia mampiseho amintsika. fa i Matio dia efa nandre momba an'i Jesosy ary nanny hanaraka Azy tamin'ny fony rehetra. Koa rehefa niantso azy i Jesôsy dia efa vonona izy. Nahagaga an'i Matio ny nanirian'i Jesôsy azy ho anisan'ireo mpanara-dia Azy.
Ao am-pontsika lalina ao, isika koa dia maniry zava-dehibe kokoa eo amin'ny fiainana. Zava-dehibe kokoa noho no tenantsika no irintsika hatao antom-piainana. Izany no antony iantsoan'i Jesôsy antsika hanaraka Azy toy ny nataon'i Matio.
Saino ny amin'ireo zavatra tsy maintsy afoin'ny olona hanarahana an'i Jesôsy . Nahoana anefa no tena ilaina tokoa izany fahafoizana izany?
I Paoly, mpitarika voafidin'Andriamanitra (Asa. 9:3-6,10-20)
Rehefa nanaiky Jesosy i Paoly dia niova ny fiainany manontolo, tamin'ny lafiny rehetra. Nomen'i Jesosy hoavy hafa tanteraka izy. Nitarika an'i Paoly hanao fanandramana koa i Jesosy, fanandramana izay tsy noeritreretiny ho tanteraka velively. Nitantana sy nanampy an'i Paoly ny Fanahy Masina tamin'ny fitoriana ny faharnarinan'ny Baiboly tamin'ireo olona an'arivony maro izay monina manodidina ny Ranomasina Mediteraneanina. Ny fijoroana ho vavolombelona nataon'i Paoly dia nanova ny tantaran'ny fivavahana kristianina sy ny tantaran'ny olombelona. koa.
Vakio ny Asa. 9:3-6, 10-20. Ahoana no anehoan'ireo andininy ireo amintsika fa manana drafitra ho an'ny fiainan'i Paoly i Jesôsy?
Olona tsy ampoizintsika, matetika, no safidin'i Jesôsy . Eritrereto ny amin'ireo demoniaka roalahy, na koa ilay vehivavy Samaritana feo am-pantsakana, i Maria Magdalena, ny mparnory hetra, ny mpanarato. Ary izao kosa dia i Paoly, ilay lehilahy mpanenjika Kristianina! Novan'ny famindrampo sy ny fitiavan 'Andriamanitra avokoa ireo lehilahy sy vehivavy ireo. Ary dia naniraka azy ireo hanompo Azy amin'ny fo fano fifaliana i Jesôsy. Notantarain'izy ireo avokoa izay rehetra nataon'i Jesôsy teo amin'ny fiainany. Zava-mahagaga tokoa no nataon'i Jesôsy ho azy ireo hany ka tsy maintsy nozarainy tamin'ny hafa izany; tsy hain'izy ireo ny hangina fotsiny amin'izao.
Ampitahao ny Asa. 28:28-31 sy ny 2 Tim. 4:5-8. Inona no hitantsika ao amin'ireo andininy ireo, izay maneho amintsika fa nanolotra ny fiainany manontolo hanompoana an'i Jesôsy i Paoly?
Tamin'ny fotoana farany niainan'i Paoly dia hoy izy: "Koa aoka ho fantatrareo fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa, ary izy hihaino azy" - Asa. 28:28. Ny bokin'ny Asan'ny Apôstoly dia milaza fa nandray tsara ireo rehetra namangy azy i Paoly ary nitory ny filazantsara tamin'izy ireo (Asa. 28:30,31). Tamin'ny fotoana farany niainany dia nasain'ny Paoly nanao ny asan'ny evanjelistra i Timoty. Izao no ambaran'i Paoly momba ny tenany: Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho' - 2 Kor. 11:25-30.
Mety tsy mampientam-po tahaka izay Paoly angamba ny fanandramana iainantsika. Na ahoana na ahoana dia manasa antsika hiara-miasa Aminy Andriamanitra. Nandalo fotoan-tarotra maro i Paoly teo amin'ny fiainany (2 Kor. 11:25-30), kanefa nitoetra ho mahatoky tarnin'Andriamanitra. izy. Misy akony mahery vaika tokoa ny tantaran'i Paoly. Izany dia mampiseho ny zavatra azon'Andriamanitra atao amin'ny olona iray izay manolotra ny fiainany manontolo ho an'Andriamanitra.
Inona no nasain'Andrimanitra ataonao ? Tanterahanao tokoa ve izany.
Ny zavatra takin'ny fitiavana amintsika (Jao. 21:15-19)
Miseho amin'ny asa ataontsika mandrakariva ny fitiavana. Mitaona antsika hanao zavatra ho an'izay very ny fitiavantsika. Jesôsy . Izany koa no nolazain'i Paoly tamin'ny fiangonana tany Korinto, hoe: "Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay". Ny fivavahana kristianina dia tsy resaka fialana amin'ny zava-dratsy fotsiny mba ho voavonjy. Tsy hoe niala tamin'ny zava-dratsy tany an-danitra tsy akory i Jesôsy mba ho voavonjy, fa nilaozany kosa ireo zavatra tsara mba hahafahany mamonjy ny hafa. Tsy ny fotoanantsika, na ny talentantsika, na ny harentsika ihany no angatahin'i Jesôsy mba hatolotsika Azy fa ny fiainantsika koa. Indray maraina dia nihaona teo amoron'ny ranomasin'i Galilia i Jesôsy sy ny mpianany. Teo i Jesôsy no niresaka tamin'izy ireo momba ny fitiavana sy ny zavatra takin'izany amintsika.
Vakio ny Jao. 21:15-19. Araka ny hitantsika eo amin'ireo andininy ireo, inona ilay fanontaniana napetrak'i Jesôsy intelo tamin'i Petera? Inona no navalin'i Petera? Nahoana no nataony intelo izany fanontaniana izany?
Nanda am-bava an'i Jesôsy intelo i Petera. Koa naniry hahazo valiny am-bava intelo avy amin'i Petera kosa Izy izao momba ny fitiavany Azy. Nataon'i Jesôsy teo imason'ny mpianatra izany mba hanamafisana indray ny fitokian'izy ireo Petera sy lay fitokian'i Petera an'i Jesôsy. Nino i Petera fa mamela ny helony Andriamanitra, ary tiany ho tsapan'i Petera fa manana asa ho azy Andriamanitra.
Vakio indray ny Jao. 21:15-19. Amin'ity indray mandeha ity dia diniho lalina kokoa ny momba ny valin-teny nasetrin'i Jesôsy ny fitiavan'i Petera Azy. Inona no nasain'i Jesôsy nataon'i Petera?
Arahin'asa mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra. Ny tena fitiavana marina dia mihoatra noho ny hafanam-po sy ny teny mahafinaritra. Ny fitiavana marina dia ny fanoloran-tena tanteraka ho an'ny olona iray. Manosika antsika hiasa ny fitiavana, mitaona antsika hanampy ny sahirana izany. Hoy i Jesôsy tamin'i Petera: Fahano ary ny ondrikeliko - Sady didy izany no teny fampaherezana, Asain'i Jesôsy mamaly ny fitiavany i Petera. Mampirisika an'i Petera ihany koa i Jesôsy hinoany fa mbola tian'Andriamanitra hiasa ho Azy hatrany izy, na dia taorian'ny nandavany an'i Jesôsy aza. Toy ireny tsy nahalala an'i Jesôsy ireny tokoa mantsy izy, ary ny loza dia ity : efa nolazain'i Jesôsy mialoha taminy izany.
Nahoana no resahintsika ny momba io lohahevitra io? Satria mety efa nanda ny Tompo imbetsaka toa an'i Petera koa ianao. Ny vaovao mahafaly dia ity: mamela ny helokao Andriamanitra; tsy vita hatreo tsy akory ny momba anao fa mbola mila anao Izy; manana asa hampanaovina anao Izy raha vonona hanao izany ianao.
Rehefa tapitra ny resaka nifanaovan'i Jesôsy sy i Petera dia nitsangantsangana teo amoron-drano izy ireo. Raha nitopatopa nananika ny morony ny onja, dia nambaran'i Jesôsy izay tsy maintsy hiaretan'i Petera amin'ny maha-mpianany azy. Tian'i Jesôsy ho takany tsara ny toe-javatra holalovany raha manaiky ilay antson'i Jesôsy izy hoe: Fahano ny ondrikeliko Jao. 21:15.
Vakio ny Jao. 21:18,19. Inona no lazain'i Jesôsy fa tsy maintsy hiaretan'i Petera noho ny fanarahany Azy? Araka ny hevitrao, nahoana i Jesôsy no naneho tamin'i Petera zavatra manaitra toy izany tamin'io fotoana io? Ao amin'ny Jao. 21:18,19, dia manambara amin'i Petera ny fomba hahafatesany (Petera) i Jesôsy, hahinjitra eo amin'ny hazofijaliana mantsy ny tanany.
Nahoana no nambaran'i Jesôsy tamin'i Petera mialoha ny fomba hahafatesany? Te hanome safidy azy Izy. Natolotr'i Jesôsy an'i Petera ny fifaliana lehibe indrindra eo amin'ny fiainany, dia ny mahita olona maro voavonjy ho amin'ny fanjakan'Andriarnanitra. Amin'ny andro Pentekosta mantsy dia hahita olona an'arivony maro hanaiky an'i Jesôsy i Petera. Nanao fahagagana maro amin'ny anaran'i Jesôsy izy ary ho azony ny fifaliana maharitra mandrakizay amin'ny fiaraha-miasa amin'i Jesôsy. Kanefa misy sarany izany valisoa izany. Tsy nafenin'i Jesôsy an'i Petera io fahamarinana io. Fantatr'i Petera ankehitriny fa na inona na inona angatahin'i Jesôsy mba homeny dia ho foiny avokoa.
Vakio ny Jao. 3:16-18. Inona no atao hoe fitiavana marina araka ny voalazan'i Jaona? Ahoana no anehoantsika fa tena izy ny fitiavantsika? Rehefa any an-danitra, dia hahatsapa isika fa tsy ampy ny zavatra vitantsika ho an'i Jesôsy.
Mihoatra lavitra noho izay nomentsika Azy teto amin'ity fiainana ity no homeny antsika rehefa any an-danitra. Izany no antony tokony hahafaly antsika haneho ny fitiavantsika Azy amin'ny alalan'ny tenintsika sy ny asantsika. Ny fahafoizantsika ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra no anehoantsika fa tia Azy isika. Manampy antsika hijoro ho vavolombelona sy haneho an'i Jesôsy amin'ny olona ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra, ary dia iainantsika ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Hoy i Jesôsy : Raha fantatrareo izany, dia ho sambatra hianareo, raha manao izany. Jao. 13:17. Ambarao ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fitiavany, iaino ho Azy ny fiainanao. Rehefa omenao voninahitra Andriamanitra dia ho fantatrao ny tena fifaliana marina sy ny fahasambarana maharitra.
Aiaivo sary an-tsaina ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesôsy. Tahaka ny ahoana re izany e? Resaho ao amin'ny kilasy misy anao izany.
Ireo mpitondra fiangonana dia tokony hitady fomba hahatonga ny mambra tsirairay handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Tsy tena natao tsara izany teo aloha. Tokony hampiasaina hanompoana an'Andriamanitra ny talentan'ny tsirairay. Misy drafitra tokony hatao sy hajaina amin'ny fanaovana izany. Vitsy monja ireo izay mahatsapa ny haben'ny fatiantoka noho ny fanarahana izany torohevitra izany.
Tsy maintsy manam-pahendrena toy ireo manana-boninahitra ny mpitarika ny asan'Andriamanitra. Tsy maintsy mamolavola drafitra handrosoana izy ireo. Tsy maintsy dinihiny izay asa azon'ny mambran'ny fiangonana atao ho an'ny namany sy ny mpifanolo-bodirindrina aminy. Tsy mety ho vita ny asa atao eto amin'ity tany ity raha tsy manatanteraka ny asa tokony hovitainy ny mambra.
«Ny asa famonjem-panahy dia mila asan'ny tena manokana, izay tsy maintsy andraisantsika rehetra anjara. Tsy maintsy zaraintsika amin'ny hafa ny fahamarinan'ny Baiboly. Tsy azontsika atao ny miandry ny olona hanatona antsika. Inona re ny teny azo lazaina amin'ireo lehilahy sy vehivavy mba hifohazany sy hahatonga azy hiasa e? Kely sisa ny fotoana ananantsika. Efa mby eo an-tokonan'ny fiainana mandrakizay isika ka tsy manam-potoana holanilanina foana isika. Manan-danja ny segondra tsirairay ary sarobidy loatra ny fotoana ka tsy tokony hampiasaintsika amin'izay mahafinaritra antsika fotsiny. Iza no hitady an'Andriamanitra? Iza no mba handray hery avy Aminy mba ho mpanompony mahatoky eto amin'ity tany ity?.
'Misy talenta maro ao amin'ny fiangonana tsirairay. Azo ampitomboina ireny talenta ireny mba hahatonga izany ho fitaovana tena mahomby izay hanampy tokoa amin'ny asan'Andriamanitra. Ho tanteraka izany rehefa ampiasain'ny vahoakantsika izany talenta izany hanaovana asa marina. Ny tena ilaintsika indrindra ho fampandrosoana ny fiangonana dia mpiasa izay mahafantatra ireo talenta misy ao amin'ny fiangonana. Tsy maintsy ampitomboina ireo talenta ireo. Tsy maintsy beazintsika ny tenantsika hampiasa ny talentantsika ho an'Andriamanitra.. — TFC, b. 9, tt. 116,117, nasiam-panamboarana.
1. Inoa no hevi-dehibe indrindra azo tsoahina avy amin'io voalazan'i Ellen. G. White etsy ambony io? Ahoana no mahatonga ny fampitomboanna ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta hisy akony eo amin'ny fijoroana ho vavolombelona ataontsika? Ahoana ihany koa no hahatonga ny fijoroan'ny fiangonanao ho vavolombelona amin'ny hafa hahery vaika kokoa vokatr'izany?
2. Amin'ny fomba ahoana mazana no isehoan'ny tena fitiavana marina? Manomeza ohatra vitsivitsy momba ny fitiavana sandoka.
3. Miresaha momba ireo zavatra izay ilaozan'ny olona noho ny amin'ny Tompo. Ahoana ny amin'ireo olona izay namoy ny ainy noho ny finoany? Inona ny lesona azonao tsoahina avy amin'ireny tantara ireny?
4. Inona no efa nilaozanao noho ny amin'i Jesôsy ? Nahoana ianao no nanao izany? Nahoana no izany no mety? Ahoana no hanazavanao izay nataonao sy ny antony nanaovanao izany amin'ny olona iray izay tsy Kristianina?